Jubaland oo Celisay Qaxooti ka Imanayey Dhadhaab
Maamulka Jubaland ayaa sheegay inay hakiyeen qaxootigii laga soo celinayay xeryaha Dhadhaab ee dalka Kenya.
Arintan ayey u sababeeyeen kadib markii sida ay sheegeen looga baxay ballan horey looga qaaday oo aheyd in dadka la soo celinayo la siinayo adeegyada ay u baahan yihiin marka ay gudaha Soomaaliya ku soo noqdaan.
Maamulka ayaa sheegay inay xaqootiga ay haatan ku hakiyeen magaalada Dhoobley aysanna ogolaan doonin inay halkaa uga soo gudbaan Jubaland maadama aysan qaadi karin culeyska iyo tirada qaxootiga soo noqonaya.
Wariyeheenna Maxamed Colaad Xassan ayaa arrintan ka wareystay, wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga ee Jubaland General Maxamed Warsame Darwiish, wuxuuna ugu horeyn weydiiyay sababta ay qaxootiga u horjoogsadeen.
Jubaland oo celisay qaxooti